Andriamanitra koa dia tia ny tsy mino an'Andriamanitra - Church of God Switzerland
lahatsoratra > Miresaka momba ny fiainana > Andriamanitra koa dia tia ny tsy mino an'Andriamanitra
Isaky ny toeran'ny adi-hevitra momba ny finoana dia manontany tena aho hoe maninona no toa ny mpino no mahatsapa fa misy tsy fatiantoka. Toa ireo mpino dia toa nilaza fa nahazo porofo ny atheista raha tsy hoe ny mpino dia nahomby tamin'ny fandavany azy ireo. Ny tena marina dia tsy afaka manaporofo fa tsy misy Andriamanitra. Satria ny mpino dia tsy maharesy lahatra ny tsy mino an'Andriamanitra ny fisian'Andriamanitra. Nanamafy ny atheistista Bruce Anderson tao amin'ny lahatsorany "Fiekenan'ny Atheista": "Tsara ny mahatadidy fa ny ankabeazan'ny olona manampahaizana indrindra izay efa niaina taloha dia nino an'Andriamanitra." Maro ny tsy mino an'Andriamanitra tsy te hino ny fisian'Andriamanitra. Aleon'izy ireo kokoa ny mahita ny siansa ho lalana tokana mankany amin'ny fahamarinana. Nefa ve ny siansa no tena lalan'ny fahamarinana?
Ao amin'ny bokiny hoe: "The Devil's Delusion: Atheism and Its Scientific Pretension", ilay agnostika, David Berlinski, dia nanantitrantitra fa ny teoria manjaka momba ny fisainan'olombelona: ny Big Bang, ny niandohan'ny fiainana ary ny niandohan'ny zavatra dia misokatra ho an'ny adihevitra. . Manoratra izy ohatra:
«Ny filazana fa ny fisainan'ny olombelona dia vokatry ny fivoarana dia tsy zava-misy tsy azo raisina. Vao nahavita ny hevitra ianao. »
Amin'ny maha mpitsikera ny famolavolana manan-tsaina sy ny Darwinism, nanondro i Berlinski fa mbola misy trangan-javatra maro izay tsy hain'ny siansa. Misy ny fandrosoana lehibe amin'ny fahatakarana ny natiora. Saingy tsy misy na inona na inona - raha mazava sy voalaza marina - dia ilaina atao ny tsy miraharaha mpamorona iray.
Mahalala mpahay siansa manokana aho. Ny sasany amin'izy ireo dia mpitarika eo amin'ny sahan'izy ireo. Tsy manana olana izy ireo hampifanaraka ny fitohizan'ireo zavatra hitohizany amin'ny finoany an'Andriamanitra. Arakaraka ny ahitanao ny famoronana ara-batana, dia vao maika manamafy ny finoanao ny Mpamorona izany. Nasongadin'izy ireo ihany koa fa tsy misy fisedrana azo atao, izay manaporofo na manohitra ny fisian'Andriamanitra indray mandeha. Hitanao fa Andriamanitra no mpamorona fa tsy ampahany amin'ny famoronana. Tsy afaka "mahita" an'Andriamanitra ianao amin'ny fitadiavana azy amin'ny alàlan'ny famoronana lalina kokoa. Andriamanitra dia manambara ny tenany amin'ny olona amin'ny alàlan'i Jesosy Kristy zanany ihany.
Tsy ho hitanao mihitsy Andriamanitra vokatry ny fanandramana mahomby. Azonao atao ny mahalala an'Andriamanitra, satria tiany ianao, satria tiany ianao hahafantatra azy. Izany no antony nanirahany ny zanany lahy ho iray aminay. Rehefa tonga saina amin'ny fahalalana an'Andriamanitra ianao, izany hoe rehefa avy nanokatra ny fonao sy ny sainao izy, ary rehefa niaina ny fitiavanao manokana ianao dia tsy hisalasala fa misy Andriamanitra.
Izay no ahafahako miteny amin'ny tsy mino an'Andriamanitra fa anjarany ny manaporofo fa tsy misy Andriamanitra fa tsy amiko hoe misy Andriamanitra. Raha vao fantatrao izy dia hino koa. Inona no tena famaritana ny tsy mino an'Andriamanitra? Ny olona tsy (mbola) mino an’Andriamanitra.